Uyenza njani uLuhlu lweNtengiso ye-imeyile usebenzisa iMedia Media | Martech Zone
Uyenza njani uLuhlu lweNtengiso ye-imeyile usebenzisa iMithombo yeendaba yeNtlalo
NgoMgqibelo, uJanuwari 25, 2020 NgoLwesine, Novemba 12, 2020 URonen Shnidman
Ukuthengisa nge-imeyile kuyeyona ndlela ithandwayo yabathengisi yokufikelela kubathengi abanokubakho ukusukela oko kwamkelwa ngokubanzi phakathi kweminyaka yoo-1990. Ngaphandle kokudalwa kweendlela ezintsha ezinje ngemidiya yoluntu, ifuthe, kunye nokuthengisa umxholo, i-imeyile isathathwa njengeyona isebenzayo ngoku survey Abathengisi abayi-1,800 abaqhutywa yiSmart Insights kunye neGreatResponse.
Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba intengiso ye-imeyile yezona ndlela zintle azivelanga ngetekhnoloji entsha. Enkosi kumajelo asekuhlaleni ngoku kukho iindlela onokuthi uwuphucule kakhulu umgangatho woluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile ngaphezulu nje kwefom yokungena kwiwebhusayithi kunye nokuthenga uluhlu lweqela lesithathu.
Apha ngezantsi zintlanu iindlela onokusebenzisa ngazo imithombo yeendaba zentlalo ukuphucula umgangatho woluhlu lwakho lwe-imeyile olukhokelayo ukusuka kwiziseko ukuya kubuchwephesha phambili.
Fumana abaLandeli bakho beMidiya yezeNtlalontle ukuNqumla amajelo
Eyona ndlela ilula yokuphelisa uluhlu lwakho lwe-imeyile ngamajelo eendaba ezentlalo kukukhuthaza abahlobo bakho beendaba zosasazo, abalandeli kunye nonxibelelwano ukuze ubhalisele uluhlu lwakho lwe-imeyile. Le inokubonakala icacile, kodwa iinkampani ezininzi azikhathazi ngokulandela umkhondo kunye nokuzibandakanya kwabo kwizikhokelo ezahlukeneyo.
Musa ukucinga ukuba abalandeli bakho beendaba zentlalo ikakhulu ngabantu abafanayo nolwahlu lwakho lwe-imeyile. Kwakhona, musa ukubhala ixabiso labahlobo bakho kwimidiya yoluntu njengokuswela igunya lokwenza okanye lokuchaphazela isigqibo sokuthengisa. Kumava am, ayinyani.
Yenza umkhankaso wemidiya yoluntu okhokelela kwiphepha lokungena kwiwebhusayithi yakho. Uya kumangaliswa ukuba zingaphi izinto ezisemgangathweni onokuzibhalisa ngeewebhusayithi ezinje ngeTwitter, iFacebook kunye neLinkedIn ukuba uhlala ubandakanyeka kubasebenzisi boluntu kwincoko yemixholo kunye nomxholo ongezwe ngexabiso. Kubaluleke kakhulu, ukuba aba bantu bahlala bezibandakanya nawe kwimidiya yoluntu banamathuba amaninzi okuvula kunye nokufunda ii-imeyile zakho.
Ukufumanisa ukuKhangela okuKhangelelweyo okufihliweyo kunye nabaphulaphuli bakaFacebook
Ngamajelo eendaba ezentlalo, uluhlu lwakho lwe-imeyile lwangoku alunxibelelani nabantu abodwa. Ikwavula iphuli enkulu ngakumbi enokubakhokelela abantu abafanayo abasebenzisa i-Facebook Uphawu lwabaphulaphuli ngokwezifiso.
Sebenzisa inqaku kulula. Konke okufuneka ukwenze kukulayisha okanye ukukopa kunye nokuncamathisela uluhlu lwakho lwe-imeyile olukhokelela kwispredishithi. Emva koko unciphise abaphulaphuli bakho ngokwesiko ezifanelekileyo ezifanelekileyo, ezinje ngobudala kunye nomdla, kwaye uxelele u-Facebook ukuba afumane ababukeli bokubukela.
I-Facebook iya kuthi emva koko ithumele isiseko sedatha yayo ukufumana abantu abaneempawu ezifanayo kuluhlu lwangoku lwababhalisi be-imeyile. Yenza intengiso ekujoliswe kuyo eya kwenza ukuba amalungu abaphulaphuli bakho abukeke ukuba bacofe kwaye baye kwiphepha lokufika kwindawo yakho kwindawo yakho yangaphambi kokucebisa.
Sebenzisa iMithombo yeNtlalo ukuFumana iidilesi ze-imeyile
Unokusebenzisa ukuphatha imithombo yeendaba ezentlalo ukufumana iidilesi zomsebenzi we-imeyile ekhokelayo usebenzisa indlela elula, kodwa ethe kratya ethe kratya, ebizwa ngokuba kukufakwa kwedatha.
Ukufakwa kwedatha kwintengiso kusetyenziswa inkonzo yomntu wesithathu ukugcwalisa okushiyekileyo (njengesihloko somsebenzi okanye idilesi ye-imeyile yomsebenzi) yolwazi lwakho lokunxibelelana. Ezinye iinkampani ezijolise kule ndawo, zibandakanya iSellhack, Clearbit kunye nePipl (apho ndisebenza khona).
Umzekelo, kuPhendlo lukaPipl, abasebenzisi banokufaka uluhlu olunamagama akhokelayo kunye nemithombo yeendaba ezentlalo kwaye ukhuphele uluhlu kunye needilesi ze-imeyile ezingekhoyo ezongezwe kuyo.
Ezi nkonzo zoncedo lwedatha zinokusetyenziselwa fumana iidilesi ze-imeyile isikhokelo esinokubakho esifumaneka ngokumamela ekuhlaleni. Ukuthintela ukuba ngumenzi wogaxekile qiniseka ukuba ubonelela ngokucacileyo xa ukhetha ukufikelela kwaba bantu.
Qinisekisa uluhlu lwakho lwe-imeyile okanye ngaphandle kwemithombo yeendaba
Kuyinyani yokuthengisa nge-imeyile ukuba ipesenti ethile yabantu iya kubhalisela uluhlu lwakho lwe-imeyile usebenzisa iidilesi ezingezizo ze-imeyile. Ayipheleli ekuthumeleni nge-imeyile ezi dilesi zichitha ixesha lakho, kodwa ii-imeyile ezininzi kakhulu ziya kuthi ekugqibeleni zikhokelele umnikezeli wakho weenkonzo ze-imeyile ukuba akubize nge-spambot kwaye vimba iakhawunti yakho.
Ungasebenzisa inani elinamaxabiso okhuphiswano Iinkonzo zokuqinisekisa nge-imeyile ukukhupha ii-imeyile ezingezizo, kubandakanya Ungaze uyekelele, Qinisekisa, Isiqinisekiso se-imeyile ngobuninzi, Isiqinisekiso se-imeyile kwaye Umgangatho weDatha yamava.
Rhoqo, abantu baya kusebenzisa iiakhawunti ze-imeyile okanye idilesi abazijonga rhoqo kubaboneleli abanjengoGmail kunye no-Yahoo bezalisa ifom yoqhakamshelwano. Oku kwenza ukuba okunene ukunxibelelana naba bantu kwaye ukufaneleka kufanelekile kukhokelela kubunzima ngakumbi.
Ngethamsanqa, iinkonzo ezinje Idilesi entsha kwaye Idatha yeNqaba kuya kukunceda ufumane iidilesi ze-imeyile ezikhethwe ngabathengi kunye nee-imeyile ezinokuthi ziphendule ekunikezelweni ngokusekwe kumanqaku omsebenzi.
Ngenye indlela, ungasebenzisa imithombo yeendaba zosasazo kunye needilesi zemeyile ezidlulileyo nge IPipl's Idatha yaBantu ye-API ukufumana enye idilesi ye-imeyile. Idatha eneembali zembali kwiirekhodi ze-imeyile kufuneka zikunike umbono wokuba i-imeyile iyasetyenziswa kunye nesihloko somsebenzi esinokubakho kunye nolunye ulwazi olwenziweyo lokukhokela umgangatho.
Isitshixo sokumisela ukuba zeziphi ezi ntlobo zintathu zeenkonzo ezithelekisa amaxabiso abo, amaxabiso omdlalo kunye nendlela itekhnoloji yabo engena ngayo kuludwe lwamanqanaba okhokelo kunye nenjongo.
Inzuzo elula yoKhuphiswano
Olona hambo luphambili lokuthabatha kukuba kubalulekile ukuba ube nokuyila usebenzisa ubuchwepheshe obutsha ukuphucula umgangatho woluhlu lwakho lokuthengisa nge-imeyile kunye namaxabiso encoko yabo. Olunye uphando olwenziweyo kolo phando ngo-2015 lwe-Smart Insights yayikukuba sisininzi esincinci (iipesenti ezingama-53) zabathengisi ababesebenzisa i-lead-gen kunye noludwe lwezixhobo zokwakha ukuphucula ubungakanani kunye nokusebenza koncedo lwabo. Abathengisi abambalwa kakhulu (ngaphantsi kwama-25%) basebenzise izicwangciso zentlalo okanye zomxholo ukwakha izikhokelo ezisemgangathweni. Zinike ithuba lokukhuphisana. Ukuthatha inyathelo elongezelelweyo kunokuba lula.
tags: QinisekisaIsiqinisekiso esikhulu se-imeyileiiakhawunti ze-imeyileisiqinisekiso se-imeyileukuqinisekiswa kwe-imeyileUmgangatho wedatha yamavaidilesi entshaumbhobhoIdatha yepipl apiImidiya yokuncokolaidatha yenqaba
URonen ungumvangeli kwimveliso Umbhobho, Inkampani ezinikele ekwenzeni kube lula ukusebenzisa ulwazi lwentlalo kunye nolwazi malunga nabantu. Ungamlandela kunye neendaba zamva nje kunye nohlaziyo oluvela IPipl kwi-Twitter.
Epreli 28, 2017 ngo-6: 53 AM
Hee, enkosi ngokwabelana ngolwazi oluluncedo malunga nokuThengiswa kwe-imeyile. Ndiyavuya ukubona ezinye iibhloko zakho malunga nenkonzo ye-imeyile.